ချွေးနံ့ပြင်း လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ..... - Hello Sayarwon
ချွေးနံ့ပြင်း လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ.......
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 15/09/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အရင်က ချွေးနံ့ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မရှိဘူးတဲ့အရာပါ။ အခုကျမှ ချွေးနံ့ပြင်း တာက အနံ့ကို မခံနိုင်အောင်ပဲ။ အခြားသူ မပြောနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာတောင် အနံ့မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့်များလဲ။
ရေချိုးတာများ မစင်တာလားဆိုတော့လည်း သေချာ ပြောင်စင်အောင် ရေချိုးသန့်စင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ရေချိုးပြီး ၂ နာရီ မကြာခင်မှာတင် ချွေးနံ့က ပြန်ပြင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေရှိလား…… ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက သင့်အတွက်ပါ။
ချွေးနံ့ပြင်း လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ……. ဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား…….
ချွေးနံ့ပြင်းတာက လူတိုင်း မကြုံဖူးသူရယ် မရှိပါဘူး။ တစ်ခါတလေဆိုတာ ပုံမှန်လို့ ဆိုလို့ ရပေမယ့် အမြဲလိုလို ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါပြီ။ ဒီတော့ ချွေးနံ့ပြင်းတာက ဘာတွေကြောင့် ဖြစ်မလဲဆိုတာကို အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ချွေးနံ့တွေ ပြင်းလာပြီဆိုရင် ဒီအချက်တွေများ ရှိနေပြီလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှု များနေတဲ့အခါမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်က ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ချွေးနံ့ပြင်းတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု များတဲ့အခါမျိုးနဲ့ စိုးရိမ်စိတ် များတဲ့ အခါမျိုးမှာ ခန္ဓာကိုယ်က ချွေးတွေ အများကြီး ထွက်တတ်သလို ချွေးနံ့ကလည်း ပုံမှန်ထက် ပိုပြင်းတတ်ပါတယ်။
အချို့သော အစားအသောက်တွေက ချွေးနံ့ကို ပြင်းစေနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ဆာလဖာ ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးတာ။ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ကြက်သွန်နီ တို့လိုမျိုး အစားအစာတွေကို စားမိတာကလည်း ချွေးနံ့ပြင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ကမောက်ကမ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်တဲ့ ဆီးချိုရောဂါ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်လည်း ချွေးနံ့က ပြင်းနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရှိသူတွေမှာ Acetoneကြောင့် ချွေးနံ့က ချိုအီအီနံ့ ဖြစ်နေတာမျိုးတောင် ရှိနိုင်ပါတယ်။
အသည်း နဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ခံစားနေရတာ
အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာလည်း ချွေးနံ့ပြင်းတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အ​ကြောင်းကတော့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့အခါ ချွေးထဲမှာ ယူရီယားပမာဏ များနေတာကြောင့်ပါ။ အသည်းပျက်စီးတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်တွင်းမှာ အဆိပ်အတောက်တွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်မှု အားနည်းလာတာကြောင့် ချွေးနံ့ဆိုးတာတွေကို ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။
ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် ကမောက်ကမ ဖြစ်တာ
လူ ၃ ဦးမှာ တစ်ဦးလောက် ချွေးနံ့ပြင်းရတာက ကိုယ်တွင်းမှာ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်တွင်းမှာ trimethyamine လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးကို ဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့ အင်ဇိုင်း မရှိတာကြောင့်ပါ။ ဒီလို အခြေအနေကြောင့် အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ ချွေးပေါက်တွေထဲကနေ ထွက်လာပြီး ချွေးနံ့ပြင်းရတာပါ။
ချွေးနံ့ပြင်း စေတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ကတော့ သိုင်းရွိုက်ပြဿနာ ရှိနေတာပါ။ သိုင်းရွိုက်က ပုံမှန် အလုပ် မလုပ်ရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံမှန်ထက် ပိုအလုပ်လုပ်ရင် ဖြစ်ဖြစ် ချွေးတအား ထွက်တာ ချွေးနံ့ပြင်းတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ချွေးပိုထွက်လေလေ အနံ့ပြင်းလေလေပါ။ တစ်ခါတလေမှာ သောက်သုံးရတဲ့ ဆေးဝါးတွေကြောင့် ချွေးတအားထွက်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်က ချွေးနံ့ပြင်းနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ သွေးဆုံးခါနီးပြီဆိုရင် ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်တာ၊ ချွေးတအားထွက်တာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာလည်း ချွေးနံ့ပြင်းနိုင်ပါတယ်။
ကဲ…… ချွေးနံ့ပြင်း လာပြီဆိုရင် အခုအချက်လေးတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာမို့ သေချာလေး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။
Bad Body Odor: What It Says About Your Health https://www.everydayhealth.com/skin-beauty/bad-body-odor-what-it-says-about-your-health/ Accessed Date7September 2021
7 things your body odor might be trying to tell you https://www.medexpress.com/about/newsroom/2019-press-releases-media-coverage/medexpress-unusual-body-odor.html Accessed Date7September 2021
တစ်နေ့တာလုံး ကိုယ်ခန္ဓာက ချွေးနံ့ကင်းပြီး သင်းပျံ့နေစေဖို့
အခြားသူတွေထက် ဘာကြောင့် ချွေးထွက်လွယ်ရသလဲ